Mazano Anobva Kubasa Rokutora Kubvisa Spam Referrals Kubva Analytics
Nhamba yezvinyorwa zvekutsvaga pawebhu zvakaramba zvichiwedzera. Dzimwe hurumende dzakabatanidzwa newebsite dzepaveredzi dzakashuma zviitiko apo mamiriyoni emitauro ekutsvaga anoonekwa paGoogle Analytics. Zvakakosha kuita matanho anobatsira kubvisa kutumira kunyoresa zvakakurumidza sezvinobvira kubva kumashoko ekuongorora. Izvo zvinokonzera skewness mumatare ekushanda, zvichikonzera kusanzwisiswa kwekuita kwebasa racho. Izvo zvinowedzerawo njodzi kuvashandisi vanoshanyira nzvimbo. Chikonzero ndechokuti ava vashandisi vangada kushanyira nzvimbo yekutumira uye vanopedzisira vawana makombiyuta avo ane utachiona hwetachiona kana trojans.
Pane nzira dzakawanda dzokubvisa mararamiro e spam eGoogle Analytics. Chimwe nechimwe chezvigadzirwa izvi zvine maitiro avo, asi nzira inotevera, yakataurwa naArtem Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vokubudirira Semalt , anotenda kuti ndiyo inonyanya kushanda. Ichagadzirisa zvakawanda zvezvipingamupinyi zvinosangana nekutumira spam.
Kutanga danho racho, shandisa maGoogle Analytics purogiramu yako, uye sarudza maonero ayo machirwe machirwe ekushandisa. Nguva dzose yeuka kuumba maonero matsva paunoshandisa ma filters uye uende usina unfiltered kuti uite sechinhu chezvinhu zvakasvibiswa, uye nzvimbo yekuchengetedza kana chimwe chinhu chiri kutadza pasi pasi.
Icho chinhu chitsva muGoogle Analytics iyo inosvina mamwe ekuongorora kwebhoji pane zvinyorwa zve analytics..Icho hachibvumiri kutumirwa kuparadzaniswa kune wose, asi kunoshanda sechinhu chakanaka kutanga. Sarudza zvirongwa kubva pane zvauri kuona zvaunoda kufuta. Pasi pepaji ino ibhokisi rinotarirwa rakasununguka, zvichiita kuti musikana asarudze zvose zvitsva kubva kubhizi dzinozivikanwa uye spiders. Tarisai, uye iwe zvino wakagadzirira kuenda.
2. Kuwedzerwa Kusarudzwa Kwekufambisa
Izvo zvakananga asi zvinoda kushanda zvishomanana kupfuura bot filtering. Muchikamu chechikamu muG GA, sarudza All Filters, uye nepamusoro pane sarudzo yekuumba firiji itsva (iyo bhodhi iri mufiira). Nhaurirano yejiji yepamusoro iri nyore kushandisa nekugadzirisa. Zvinongobvira chete kana mushandisi wezvino anokwanisa kubvumidza kubva kune webmaster.
Zita firiji rine zita rinotsanangura se "Bvisa (Site)." Iko inofanira kunge iri tsika yekuisa muyero yehutachi. Chengetedza Bhokisi risina kukwana, uye kubva pakudonhadzika kwemenyu mu filter field, sarudza "Referral." Nyora URL yaunoda kuisa kunze kwemufananidzo wefaira. Dhura pasi kunzvimbo iyo musarudzo akasarudza maonero api kuti ashandise zvirongwa. Dzvanya pane imwe uye wobva wawedzera pane yakarongwa, uye chengeta Save.
3. Edza uye Edzai
Ndiyo danho rekupedzisira rekuita iro rinosanganisira kuongorora maGoogle Analytics mushumo kwemavhiki mashomanana anotevera kuti aone kana mafiritsi ari munzvimbo ari kushanda. Zvakakosha kuisa rukudzo pakutanga kwegadziriro iyi inoratidza chikonzero chaive nemigwagwa yakawandisa vasati vatsvaga. Kana pane zvimwe zvinoonekwa zvakanaka, zvino ikozvino yakachengeteka kushandisa mafiritsi kune maonero makuru. Kune rurefu rurefu rwe spam bots online, uye zvitsva zviri kuwedzerwa mazuva ose, kubatsira vashandi vekutsvaga vanoona zvisiri izvo zvemashamba emigwagwa uye vagoenzanisa nezvakanyorwa Source .